Wararka Maanta: Khamiis, Aug 30, 2018-Wararkii ugu danbeeyay Boobka ganacsatada ajaanibta ah ee Koonfur Africa
Ibraahin Aadan oo ka mid ah ganacsatada Soomaaliyeed ee hanti-dooda lagu Boobay Soweto ayaa sheegay in labo tukaan oo uu lahaa la qaatay gabi ahaanba wixii hantidi ahaan ee uu yaalay, isagana uu lafahiisa kala baxsaday.
‘’Anniga waxa leyga dhacay labo dukaan, waayo mid wuu yara-weynaa oo waxaa uu ahaa Super Market, hantida leyga dhacay waxaa ay gaareysaa qiyaastii ilaa $350.000 (Saddex Boqol iyo Kunton Kun oo Dollar) ayuu yiri Ibraahim Aadan’’
Xaafadda uu boob-kani ka dhacay ee Soweto ayuu ku tilmaamay in ay tahay mid ka mid ah xarumaha ganacsiga ee ugu weyn caalamka, waxaana ku uruursan ganacsatada ajaanibta ee ugu badan dalka Koonfur Africa.
Ciidamada Booliiska ayuu sheegay in aysan ka qaadin boob-ka lagula kacayo ganacsatada tallaabadii loo baahnaa kaddib markii ay ku war-galiyeen weerarka lagu hayo dukaamadooda.
‘’Booliis-ka waan u yeeranay markii ay rabshaduhu bilaawdeen, iyaga oo jooga ayuu boobku socday, waayo dadka dhaca geysanayay wey ka tiro bad-naayeen Booliiska’’ ayuu yiri Ibraahim Aadan oo ka mid ah dadka ganacsigooda lagu boobey Soweto.
Intii ay rabshadahanni socdeen waxaa goobta ku dhintay nin dhalinyaro South African ah oo ka mid ahaa dadkii boobka geysanayay, waxaana dilay sida la sheegay ganacsade Soomaaliyeed oo uu isku dayay in uu boobo dukaankiisa.
Dadka boobka uu sida weyn u sameeyay ayaa ah ganacsatada u dhalatay dalalka Itoobiya, Pakistan iyo Bangladesh, halka ganacsatada Soomaaliyeed bilaabeen in ay is difaacaan iyaga oo la soo baxay hub.